Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay Jahwareerkii ka Taagnaa Shiling Soomaaliga[Dhageyso] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay Jahwareerkii ka Taagnaa Shiling Soomaaliga[Dhageyso]
BOOSAASO – Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Cali Gaas oo waraysigii labaad bixiyey muddo 48saacadood gudahood ayaa si lamid ah waraysigiisi hore uga hadley dekadda Bosaso mustaqbalkeeda, heshiiska uu la galay shirkadd Imaaraatiga ah iyo weliba dhibaatada ka taagan lacagta Shiling Soomaaliga ah.
Weriyaha laanta afsoomliga ee idaacadda Codka Maraykanaka (VOA) Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa weydiisey Madaxweynaha dhibaatada iyo jaahwareerka ka taagan lacagta Soomaaliga ah.
Madaxweynaha oo ka jawaabaya su’aasha ayaa yiri:
Dhibaatadaas waan xaliney, si wanaagsan bay u xalisantay. Shidadaan waxaa abuuray al-Shabaab, markii ay diideen lacagtii laga qaadanaayey gobolada dhexe, waxaa dhacdey markaas in dadkaasi maadaama shilinkii la qaadanaayey uu shilinkii Puntland ahaa, wixii lacag jirtey gobolada dhexe oo dhan, lacag duug ah in fuustooyin lagu soo rarey in candhomeydlayaal oo lagu soo daabulo Puntland dee Puntland waxaas oo lacag ahoo gobolada dhexe laga soo daabulay oo aan ahayn lacag fiican, dadku ma qaadan karaan dee waa diideen, lacagta sidaan u sheegay sideedaba waxa weeye waxay ku shaqeysaa kalsooni dadku ku qabaan in ay lacag tahay, haddii ay dadku diidaan lacag ma noqoneyso oo xaanshiyaadka kama duwana, marka suuqa ayaa si caadi ah isu xaliyey dowaladduna dee maadaama legal tender ay ahayd (Lacag si sharci ah wax loogu gato), muddo waxaan isku dayeyney in aan dadka ku qancino in ay lacagta qaataan, dadkii lacagtii qaadan waaye, marka dabcan waxa weeye tii ay rabeen ayey qaataan.
Weriyaha VOA oo daba socota lacagta cusub ee Puntland laga isticmaalo, oo Madaxweynuhu baarlamaanka hortiisa ka diidey in uu sheego cidda leh lacagtaas sanadkii 2016 ayaa weydiisey Madaxweynaha, waxaana hadalkoodu u dhacay sidan.
Faadumo Yaasin: Markaad tagto goobaha lacagta lagu beddelo sarrifka qalaad ee magaalada Boosaaso, waxaad arkeysaa lacag cusub oo taala meelaha qaarkood dadku iyada ayey daneynayaa lacagtaas xagee Puntland uga timid?
Dr Cabdiweli Gaas: Lacagtu waa lacgtiia awalba jirtey oo Puntland taaley.
Faadumo: Mayee waxaan ka hadleynaa lacag cusub, ciidamadu markii hore waxay qaban jireen lacago cusub oo ay sheegi jireen in meelo ka baxsan Puntland lagu soo daabacay, hadda waxaa la qabtaa lacagta duuga ah oo keliya, haddaba markaad suuqa dhexmarto waxaad arkeysaa lacag cusub oo baakadeheedi ku jirta oo aad moodo hadda in la soo saarey, marka xagee ka timid?
Dr. Cabdiweli Gaas: Lacagtaasi lacagta legal tender-ka ah (Lacag sharci ah) ee Puntland ka shaqeysa weeye.
Faadumo Yaasiin marka waa tahaye ma dowladda dhexe ayaa soo daabacda?
Dr. Cabdiweli Gaas: Lacagtaasi waa lacagta Legal tender-ka ah ee Puntland leedahay oo Puntland ka shaqeysa.
Faadumo Yaasiin markaad leedahay Puntland baa leh, Puntland miyaa daabacda marka?
Dr. Cabdiweli Gaas: Jawaabta intaas ayaan ku ekeysiinayaa, lacagtaasi waa mid legal tender ah oo Puntland leedahay.
Dhibaatada iyo jaahwareerka lacagta Soomaaliga ayaa ah mid weli taagan, waxay sabatey sicir barar iyo in maciishadu kor u kacdo, sidoo kale waxay sababtey khasaaro soo gaartey dadka ay gacantooda ku dhacdey lacagta duugga ah ee la diidey.
War ka soo baxay sanduukha lacagta adduunka ee IMF bishii Feberaayo 2017 ayaa sheegay iyaga oo kaashanaya Baanka dhexe ee Soomaaliya in ay soo daabici doonaan lacag cusub oo beddesha midda hadda jirta taasna ma noqon mid weli hirgashey.
Dad badan waxay ka wel-welsan yihiin in maamulka Puntland soo daabaco lacago badan oo cusub maadaama dadku hadda ay doonayaan lacag cusub oo keliya, lacgta cusub oo aan haysan lacag adag oo bangiyada u taala iyo dhoofka oo si weyn hoos ugu dhacay ayey sababi kartaa in qiimaha Soomaaligu gaaro heerkii ugu hooseeyey abid, maadaama lacgtaani aysan ka gudbi karin Gaalkacyo oo laga diidey gobolada dhexe kadib markii al-Shabaab amar ku soo rogeen.
Xigasho: HR MEDIA